सर्प बचाऔँ, वातावरण जोगाऔँ – जीवनशैली
Home /समाचार/सर्प बचाऔँ, वातावरण जोगाऔँ
सर्प देखे मार्न वा लखेट्न अगाडि सर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । सर्पले वातावरण संरक्षणका लागि कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कमै मात्र सर्वसाधारणलाई थाहा छ । सर्प बचाउन सकिए वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जगाउने उद्देश्यले सर्प संरक्षण समाजले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा जारी ११औँ खैरेनीटार महोत्सवमा सर्प संरक्षणका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सबै सर्प विषालु नहुने र विषालु भए पनि मानिसले नजिस्काएसम्म सर्पले आक्रमण नगर्ने भएकोले सर्प देख्ने वित्तिकै मार्न र लखेट्न नहुने समाजका अध्यक्ष महेन्द्र कतिलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सर्प मानिसको शत्रु नभई मित्र भएको र सर्पको विषले औषधि बन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मुसा खाएर किसानको बाली संरक्षणमा समेत सर्पले सहयोग पु¥याउने तथा पारिस्थितिकीय चक्रमासमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सहयोग पु¥याउँछ ।”
महोत्सव अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणलाई सर्प बचाउन सकिए वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नेबारे जानकारी प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बढ्दो शहरीकरण र मानिसको नकारात्मक सोचले सर्पको जीवन खतरामा पर्दै गएकाले त्यस बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको छ ।
महोत्सवमा विषालु कोब्रा, करेत, मुगा, हरेउ, हिमालयन किल ब्याग, कुमन क्याट लगायतका प्रजातिका सर्पको नमूना प्रदर्शनी गरिएको छ । वन विज्ञान क्याम्पसमा अध्ययनरत सर्प संरक्षणमा लागेका युवा रोहित गिरीले हिन्दू समाजमा सर्पको फोटोलाई नागदेवता भनेर पूजा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएकोले सचेतना फैलाउन कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
महोत्सव अवलोकनका लागि आउने धेरै सर्वसाधारणले उत्साहपूर्वक आफूहरुको अभियानमा साथ दिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सर्वसाधारणलाई सर्पदंश के हो ? सर्पदंश हुँदा के गर्ने ? सर्पदंशबाट बच्ने उपाय के हो ? लगायतका बारेमा सिकाइएको छ । महोत्सवमा आउने दर्शकलाई सर्प संरक्षणको सचेतना जगाउने उद्देश्यले महोत्सव मूलसमारोह समितिले समाजलाई तीन वटा स्टल उपलब्ध गराएको महोत्सवका प्रवक्ता हरिबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
चट्याङले युवतीको मृत्यु
चट्याङ लागेर तनहुँमा शनिबार राति एक युवतीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० लोकदीटारकी २४ वर्षीया भूमिका खत्री रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी खत्रीको उपचारको क्रममा पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । चैते दशैँ मनाउन माइती घर पुग्नुभएकी उहाँलाई चट्याङ लागेको थियो । सोही वडाको मीनामखानी माइती घर पुग्नुभएकी उहाँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ दुलेगौंडास्थित ज्ञानबगैँचा बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापनरत हुनुहुन्थ्यो ।
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान : वित्तीय पहुँचको आधार